Hụnanya na ike ịgwọ ọrịa nke aka - Nkwụ ụgwọ ụgwọ ọrụ
Home Blog akụkọ Hụnanya na ike ịgwọ ọrịa nke metụrụ aka
adminaccount888 19th November 2020 Akụkọ kacha ọhụrụ
Lovehụnaanya na ike ịgwọ ọrịa nke metụrụ aka dị oke mkpa maka ọdịmma anyị maka na ha na-eme anyị obi iru ala, lekọta anyị anya mesiri ike. Olee mgbe ikpeazụ metụrụ gị aka? Iji chọpụta ihe ndị ọzọ, BBC mere nyocha a kpọrọ Nnwale Ule n'echiche a dị omimi. Nnyocha ahụ malitere n’agbata Jenụwarị na Machị afọ a. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ 44,000 keere òkè na mba 112. Enwere usoro nke usoro na ederede gbasara nsonaazụ nke nyocha ahụ. Ndị a bụ isi ihe maka anyị site na ole na ole n'ime ihe ndị e bipụtara:
Ike Agwọ nke Mmetụ Aka
N'ime ụwa nke na-akwalite mmekọahụ na-akpali agụụ mmekọahụ na-akpali agụụ mmekọahụ nke na-abụkarị ụdị ime ihe ike, nke na-akpali agụụ mmekọahụ, ọ bara uru icheta na ụmụ mmadụ na-eme nke ọma na mmetụta ịhụnanya dị nro ka ọ na-eme ka anyị nwee nchebe na hụrụ anyị n'anya, dị mkpa maka ọdịmma anyị. lanarị.